Millennium - Waa maxay? | Apg29
Millennium - Waa maxay?
Qoraalka waxa laga soo qaatay buugga "The World of riwaayadaha fal la soo dhaafay" by Egon Melin.
Waxaan ugu baaqaynaa boqortooyadiisii ​​this of Millennium, maxaa yeelay waxa ay ka koobnaan doonaan kun sannadood ah, ka dib markii taas Shaydaan iman doonaa furo wakhti yar iyo khiyaaneeyo dadka u soo dhowaaday boqorkii, Masiix ka baabba '. (Rev. 20: 3-4, 7-8).
Markaas John taswiiran Ciise badiyeen ka gees ah, iyo nebigii beenta ahaa ciidammadii xoogga badan million, kuwaas oo kor u saxiixay iyaga la jira ayuu sii wadaan in ay sawir. guul Ciise ruuxa dunida. Shaydaanku waxa loo yaqaan ee Efesos. 2: 2 waayo, ciidanka hawada xoog badan amiirka. Oo uu ruuxiisa marayo, wuxuu ka dhex shaqaynaya carruurta caasinimada. Ka gees ah, nebigii beenta iyo kuwa raacsan ay waa qalab oo keliya in xoog ruuxi ah ku shaqeeya.
Haddii Ciise adkaaday kaliya fiendehärarna, kuwaas oo kor u tegi doonaa reer binu Israa'iil, iyo Ibliiska ugu dhakhsaha badan ay u bartaan lahaa qalab cusub oo dadka ku dhex, mar kale, wuxuu dhigay lahaa ciidan oo la diriri doonaa, kan madaxda dunida ah. John wuxuu yiri:
"Oo waxaan arkay malaa'ig samada ka soo degaysa, oo wuxuu lahaa fure u ah yaamayska iyo silsilad weyn oo gacanta ugu jira. Oo markaasay qabsatay masduulaagii ahaa maska ​​in qadiimiga ah, waa kan Ibliiska iyo Shayddaanka, oo isagii bay ku xidhay Waayo, kun sannadood, oo ku tuureen yaamayska hoos u geli markaasay xidhay oo intuu ku kor Lebaa daabacay, in uu mar dambe quruumaha khiyaanayn ilaa kun ah sannadood dhammaadeen. Markaas ayuu ku noqon doonaa boorsada muddo yar oo waqti "(Muujintii 20: 1-3)..
Dhab ahaantii, waxaan lahaa tafsiir, halkaas oo aanu kula macaamilooteen xukunka quruumaha. Haddii ay sidaa tahay, waxaa go'aansaday, waa in kuwaas la mid ah boqortooyada Masiixa dunida ee. Laakiin waxaa laga yaabaa in aannu daraasad la koobnayn inay marjic u Matt. 25: 31-46, halkaasoo domsakt waxaa loo sawiray.
"Waxaan laga yaabaa in markii hore waa in la yidhaahdo, in boqortooyada reer nabad ma kici iyadoo ay sabab u dayada aadanaha iyo heshiis u dhexeeya dadyowga, laakiin waa ka Prince of Peace, Ciise Masiix, kan xoogga ka mid ah kan madaxda dunida ah, Ibliisku ku qaadan doonaa, oo la abuuro boqortooyadiisa ah dhulka, taas oo ka dhigan in samada. isbadal oo dhan ugu baaqaysaa Ciise nadiifinta dhalashadii labaad ee adduunka ee. " (Mat. 19:28).
- Waxaa jiri doona nabad dhulka!
Ma aha in dhawaajiyaan weyn? Oo weliba ma aha, malana, laakiin leh a xaqiiqada dahsoon xoog leh, oo salka xaqiiqda this waa hadalka nebiyadii, waxyoonay by Ruuxa runta oo ah Ilaaha reer binu taariikhda.
Waynayn, riyada ee boqortooyada nabad taga badan. Dunidu ma ka fiican oo ka wanaagsan sidii dadka aqoonta u lahaa sare. dagaalka dhiiga labaatanaad Century wasakheeyey, magaalooyinka duqeeyay, badan oo invalids dagaal iyo qabuuraha military badan yihiin iyo sidoo kale in badan oo halakeeyey aaminsan in ay jiri karaan nabadda iyo wada noolaanshaha meerahaas. Laakiin waxan oo dhan, sidii ayaa aan dhulka la leeyahay hore labaad u muuqday rabitaan xitaa ka xoog waayo, boqortooyadii nabad.
Laakiin iyada oo dhan uu gilgisho soona doonis qalbiga aadanaha ee xanuunsan iyo hubaal la'aan, burburinta total ku eryaa madaxda hooskiisay madow dunida, iyo xataa magaalooyinkan iyo qaaradood ka badan. gantaallo Remote la eedeeyay qaaradda waxaa kaliya sugayaan in la fuliyeen. Laakiin inkastoo this, amar ma jiro kan Dhulka ka hortagi kara nabadda iyo nabad ku soo baxaan, marka ay ugu wacan.
Waxaan marka hore laga yaabaa odhan, in boqortooyada reer nabad ma kici iyadoo ay sabab u dayada aadanaha iyo heshiis u dhexeeya dadyowga, laakiin waa ka Prince of Peace, Ciise Masiix, kan xoogga ka mid ah kan madaxda dunida ah, Ibliisku ku qaadan doonaa, oo la abuuro boqortooyadiisa ah dhulka, taas oo la xiriira xagga samada. Isbadal oo dhan ugu baaqaysaa Ciise nadiifinta dhalashadii labaad ee adduunka ee. (Mat. 19:28).
shardi ee nabadda aasaaska boqortooyada yihiin, waxa aan ka hadlay ee ku saabsan ka hor: Maxaabiista Shaydaanku . dhulka oo dhan iyo dhammaan dadka degganba ee taabtay by awood u ekaysiinaya, kaas oo la imaneysaa marka Ciise baxaya madaama boqorka iyo boqortooyadiisa u xoogayn.
"Rabbigu wuxuu boqorkii dhulka oo dhan u taliya ahaan doonaan, Haa, waagaas Rabbigu wuxuu kuu ahaan doonaa mid ka mid ah oo magiciisuna mid ". (Sekeryaah 14:. 9)
Waxaan ugu baaqaynaa boqortooyadiisii this of Millennium , maxaa yeelay waxa ay ka koobnaan doonaan kun sannadood ah, ka dib markii taas Shaydaan iman doonaa furo wakhti yar iyo khiyaaneeyo dadka u soo dhowaaday boqorkii, Masiix ka baabba '. (Rev. 20: 3-4, 7-8).
Waxaan la Masiix waxaa boqor ahaan doona
Peter mar wuxuu Ciise ku yidhi: "Bal eeg, waxayagii ayaannu ka tagnay, waana ku raacnay, waxa aan u yeelan doonaa? "Markaasaa Ciise wuxuu ballan qaaday in marka cusboonaysiinta, inay ahaadaan rasuullo uu fadhiisan laba iyo toban carshi, idinkoo xukumaya laba iyo tobanka qabiil oo reer binu Israa'iil. (Mat 19:. 27-28.)
Laakiin dawladda cusub waa in aanay ka kooban yahay oo kaliya oo ka mid ah tobanka rasuul, laakiinse waxaannu yeelanaynaa yabooha: ". Honor, waxaan u samray waxaan isaga wax la xukumi doonaa" (2 Timoteyos 2:. 12.) Masiix Boqorka, oo waxaa isaga la, Golaha boqor u ahaan doontaa ah kun oo sano. Sida Ciise carshigii aabbihiis ku fadhiya, ka dibna ku guuleysan Liibaanay u helaysaa in aad la Ciise fadhiisan oo carshigiisa ku. (Rev. 3:21.) John ayaa sheegay in Revelation. 20: 4:
"Oo markaasaan arkay carshiyo, oo waxaa kuwa ku fadhiyey, wayna cuneen, wixii la siiyey iyaga." Yaa ayaa awood u leh in ay u sii? Su'aashu waxay ka jawaabaysaa Paul ee 1 Korintos. 6: 2: "Ma waydaan ogayn inaad in quduusiinta dunida ku xukumi doonaa?"
Sida laga soo xigtay Up. 20: 4 Shuhadada dhib toosay Ciise markuu boqortooyadii abuurayaa. Shuhadada Dhibaatada waa sarakicidda kowaad goosashada ka dib. Oo kuwaas oo ka qayb gala sarakicidda kowaad oo dhan boqor buu ahaan doonaa oo Masiix inta lagu guda jiro kun oo sano. (Rev. 20: 6.)
In booska aan xukuumadda cusub uu noqon doono kala duwan, na tusaya Qorniinka. Our meel kaas oo lala our aaminnimo Rabbiga ee waqtigan.
"Xaaladda nabad ee aasaaska boqortooyada yihiin, waxa aan ka hadlay ee ku saabsan ka hor:.. Maxaabiista Shaydaanku dhulka oo dhammu wuxuu giddigiis oo dhan waxaa deggan taabtay by awood u ekaysiinaya, kaas oo la imaneysaa marka Ciise baxaya madaama boqorka iyo boqortooyadiisa u xoogayn"
Peace oo u dhexeeya Ilaah iyo dadka
dagaalka oo dhan iyo isku dhacyada u dhaxeeya dadyowga leeyahay aasaaska kama dambaysta ah ee khilaafka u dhexeeya Ilaah iyo nin. Sidaa darteed, waxaa lagu fekeri karin in boqortooyo ee nabad dhulka la abuuro, ilaa iyo inta dadka doonaya in ay dib u soo noqdaan on Ilaah iyo jidka isaga u gaar ah. Ofriden iyo xumaanta, core ugu hooseeya waxaa loo yaqaan dembi.
Waxaan horey u hadlay oo ku saabsan, in Israa'iil dhamaadka dhibaatadii la kulmi doonaan badbaadada, sida ay u qirayaa ay iimaanka Ciise yahay Masiixa. Isa. 66 waa Suurad la yaab leh. Waxay hayaan, nadiifinta dhalashadii labaad Israa'iil ayaa, guuldaradii cadaawayaashayda, Israa'iil adeegayaasha quruumaha dhexdooda, iyo ugu dambeyntii dadyowga caabuddo Rabbiga.
Haddaba aynu u akhri aayadda, kaas oo ku hadla ee adeegayaasha Israa'iil ayaa quruumaha dhexdooda,
"Oo waxaan dhexdooda ka taagi doonaa calaamad, iyo qaar ka mid ah in la badbaadiyey waxaan idiin soo diri doonaa sida Rasuul quruumaha, Tarshiish, Pal iyo wiilkuna, dadyowga archery, si Tahal iyo] Avan, iyo gasiiradaha fog, oo aan maqlay wax igu saabsan ama aan ammaantaydana arag, oo iyana ammaantayday quruumaha ka dhex sheegi doonaan. "(V. 19.)
Qaar ka mid ah ayaa tilmaamay in kuwan. adeegayaashan Israa'iil ka ma baahna diriri ku adag tahay luqadda si la mid ah sida aan. Waayo, Yuhuudda ahayd ku kala firdheen dalalka oo dhan iyo afafka oo dhanba waxaa wakiil oo dalka Israa'iil. Sidaa darteed, waxay leeyihiin oo kaliya ka dib markii ay ku badbaaddeen, ku noqo waddammadii ay tageen ugu noolaa qurbaha, laakiin hadda sida adeegayaashan.
Warar xan ah oo Ciise sameeyey dadkiisa, Israa'iil, si degdeg ah ku kala bixin doonaa dhulka oo dhan u taliya. Maxaad aan Yuhuudda qasab inay Rabbiga aan Yuhuudda ahayn in ay ka cararaan, laakiin sidii Rabbigu wuxuu leeyahay,
"Haddana waxay noqon doontaa in dadka halkan iman doonaa oo dadka degan magaalooyinka intooda badan, iyo dadkii degganaa doonaan dad magaalo kale u tagaan, oo wuxuu ku yidhi, Kaalay, ina keena oo aynu Rabbiga hortiisa ku tukadaan, oo doondoonin Rabbiga ciidammada, Waxaan naftayda ku tegi lahaa, Dadyow badan iyo quruumo xoog noqon doontaa Rabbiga ciidammada doondoonaan. Oo waagaas waxay noqon doontaa in in toban nin oo afaf kala cayn ah, mid quruumaha dhexdooda ku hadlay, waa in loo qaadaa Yuhuudi ah in darafkii, oo waxaad ku tidhaahdaa, Ina keena aynu kula, waayo, waxaannu maqalnay in Ilaah idinla jiro. ' "( Sekaryaah 8:. 20-23).
"Dadku waa in ay aad u jecel yihiin, taas oo ah in la ogaado Rabbiga si aad jidadkiisa ugu socoto. (Mika 4: 2.)
Waxaa sidoo kale jiri doona xilkani weyn ee Ruuxa. Joel ee wax sii sheegidda ee xilkani Ruuxa waa sida runta ah in ay xad-dhaaf ah. (Yoo'eel 2:. 27-29) Ogow in oofinta wax sii sheegidda this ku daray oo xidhiidh la leh oo baxsada ee Yeruusaalem, oo dalka Yahuudah soo celinta iyo dadka xukunka dooxada Yehooshaafaad.
Markaasaa ninkii ku yimaado xaq u leh Ilaah taagan, waxa la sidoo kale soo dejin doonaa barakadii uu jirkeeda. Cudur iyo geeri isugu soo baxay nolosha iyo caafimaadka.
"Bal eeg, Ilaahiinnu wuxuu la iman doonaa aarsasho; ciqaab xagga Ilaah, haa, wuxuu ka mid ah, wuuna idin badbaadin. Oo markaasaa kuwa indhaha la 'indhahoodu furmi doonaan, oo kuwa dhegaha la' dhegahooda furka. . Markaas boodi curyaan ah sida deerada oo kii carrab la Kalsoonaada carrabka ' "(Ma 35:. 4-6.)
Sida laga soo xigtay Ishacyaah. 65: 18-24, ma jiraan waa dhimashada canug kasta, laakiin ilmaha waa in la dilaa boqol sano jir ah. Oo markaas dembilaha ay dhibaatadu ka ah Lacnad. Dadku waxay leeyihiin fursad ay ku dembaabaan, oo u dhinta inta lagu guda jiro Millennium, waayo, iyagu waa ku lug organic la Adam, yaa dembaabay iyo daroogada habaaray tartanka oo dhan. Laakiin dembigu ma laha awooda iyo soo jiidashada, ka dibna Shaydaanku waa xidhxidhan. panulirus The guud ahaan waa inta lagu jiro waqtigan in ay faraha la Ilaah. Sidaas, sida muuqata, xaqa in ay ku noolaadaan iyada oo loo marayo Millennium oo dhan.
In waqtigeena, waa xaqiiqo dhab ah oo, in our nolosha socdaa (Sabuurka 90., 10.) "toddobaatan sannadood ama siddeetan sannadood, haddii ay si fiican u noqon doonaan, oo markay faras waa hawl iyo murug." Nin Haddaba jeex baxay intii uu, iyo markaas iyadu ku raaxaysan doonaa safka da 'weyn, oo guriga iyadu waxay dhistay, inta badan kaxeeya cudurka iyada eryay, laga yaabee in isbitaalada ama guryaha daryeelka, ama isaga waayi awood u leh inay ku raaxaystaan. Ugu dambeyntii, ayay helo saacad dhimashada inuu ka tago natiijada uu hawshiisa si kuwa kale, kuwaas oo laga yaabaa in muran ku saabsan guryaha iyo sii qasaariyey a faa'iido Modas nolosha oo dhan. Oh, sida baaris Dufcaddii ahaa Xumo falayaal. Haddii kale, waxa ay noqon doontaa nabad waqtiga boqortooyada marka dadku ma yihiin modar aan micne lahayn. (Isa 65:. 21-23.) Peace u dhaxaysa dadyowga
Kitaabku waxa uu leeyahay waxaa iman doona wakhti marka aysan jirin hubka dagaalka waa in la sameeyaa, iyo marka ay ragga dhallinyarada aan la tababaray in ay gacankudhiiglayaasha mass.
"Waxay seefahooda ka tuman doonaan marashiyo iyo warmahoodii galay manjooyin. Nation seef uma qaadan doonto quruun, iyo dagaal dambena ma baran ". (Isa 2:. 4)
In nabad iyo shanqar la'aan, dadka markaas fadhiisan beerahoodii canabka ahaa, oo ciduna innaba kama cabsiin doonto. (Mic 4:. 4).
Aan nimcada iyo naxariista, Rabbiga cadeeyo doonaa in dhammaan dagaalka. Laakiin goortuu naxariis darro ah xaaqin wax kasta, garabaka dagaal iyo dhiig, wuxuu muujinayaa aad u Naxariistiisa koobi karayn Dadka. Iyo caddaalad iyo xaqnimo uu boqortooyadiisa u xoogayn doonaa. (Isa 9:. 5-7).
Waxaa maal idiina wayn ujeedooyin milatari ee dunida waqtigan. Xasuusnow, waqti marka dhacaya, markaas waa in aanay noqon "posted dinaar ujeedooyin milatari. Markaas, dalalka la eego dhaqaalaha in ay soo socda: maqla waxa Rabbigu noo ballanqaaday,
"Kooxaha ku soo dejin doonaa dahab halkii copper, oo keeno lacag halkii naxaasta iyo birta halkii ay qori, iyo birta halkii dhagax. Oo waxaan nabad awoodaha aad ku soo dejin doonaa oo kuwa kuu taliyana. mar dambe xaalkaas way maqli doonaan oo ku saabsan rabshadaha ee dalka, laguma halligaadna soohdimahaaga dhexdooda, laakiin derbiyadaadii kugu "Badbaado" oo waxaad irdihiinna ku mahad 'waxaad u bixin doontaa "(Isa 60:. 18).
Peace ee dunida xayawaanka sida ay u muuqato ugu qalaad waa in xoolaha ay yihiin mar dambe bahal sida midba midka kale bay eryan doonaan, oo midba midka kale ku jeexjeexi, inay ka baqin, oo midba midka kale ama mid kasta oo kale cunaan, markaas Rabbigu wuxuu boqor ka buurtayda quduuska ah ka noqday. "Oo yeydu waxay ho la diyaariyaa wanka, iyo panthers waxarta jiifsado, weylood, libaaxyo yaryar oo sämjas dugsiga gödhoskap wada, oo libaaxuna sida dibiga oo kale caws buu u cuni doonaa. Oo yarkii jaqaan dul cayaari doonaa godka jilbiska, ilmaha oo ah avant waa inuu gacanta saaraa saari doonaa hogga abeesada. In buurtayda quduuska ah oo dhan waxba kuma yeeli doonaan, waxna kuma baabbi'in oo dhan, waayo, dhulka waxaa ka buuxsami doona aqoonta Rabbiga, sidii moolkeeda badda waxaa ka buuxsami doona biyo "(Ishacyaah 11:. 6-9.) Tan iyo waqti inbryter in, waalidiinta u baahan tahay ma noqon ka cabsan in iyaga iyo dhallaankoodii noqon doonaa "ormbitna, xataa haddii ay ku ciyaareynaa godad jilbiska ama gacantaada u soo fidinaysid ka dhanka ah hogga abeesada. waqti Wonderful!
Peace ee dabiiciga ah
Sida dayrta saameeyeen dhammaan uunka, waa sababta oo ah guul boqornimadiisa Masiixa oo uunka oo dhan. Abuur la soo furan doonaa addoonsigii iyo yimaadaan si xoriyad ah in reer ammaanta Ilaah. (Eeg Rooma 8:.. 19-22)
Markaasaa Sayidku wuxuu u kordhiyo xukunka biqilka dhulka ka soo bixiyey, waxaa sii kordheysa dhigeyso sida ay Acts. 3: 19-21. Daraaddiis dembi, Earth uu hogaaminayo yamaarug iyo qodxan. Laakiin waxaa jira yimaado waqti marka dhirta, taas oo ahayd calaamad habaarka la baabbi'in doonaa oo bedelay dhirta, kuwaas oo calaamad barakada.
"Waxaa, qodax, Dhirta berooshka ah dugsiga koraan app, iyo meesha maraboob taagan, hadaas koraan, oo waxay noqon doontaa in Rabbiga ammaantiisa ah calaamad weligeed sii waaraysa oo aan la baabbi'in doonin." (Ishacyaah 55:. 13.)
"Cidlada iyo rayrayn doonaa iyo lamadegaan blolmstra doonaa sida ubaxnarjiska. Waxay u magooli doonaa, oo waxay ku reyreeyaan; Nasaha Lubnaan waxaa la siin doonaa waxa, Karmel iyo Shaaroon. Haa, waxay arki doontaan ammaantii Rabbiga, Ilaaheenna. Waayo, biyaa ka soo burqan doona soo cidlada iyo lamadegaankana durdurraa ka. dhulkii engegay wuxuu noqon doonaa balli khayraadka ciidda iyo biyaha qalalan, . At meeshii dawacooyinka dhisayona caws duur iyo tuubooyinka "(Ma 35,. 1-2, 7.)
The masiibooyinka weyn inta lagu guda jiro dhibaatadii ay u muuqataa in ay gaaraan sida isbedelka dhul ah, nasashada biyaha sii marey lamadegaanka oo oo aad u badan dhala. mid ka mid ah weliba, kuu sheegi karaa hadda, ee cidlada iyo lamadegaanka bilaabay in ay u barwaaqoobi, markii reer binu Israa'iil kaymo meelaha cidlada ku diyaarin iyo waraabka. Laakiin sida ay uga duwan waa in aanay noqon, ka dibna Amos 9: 13 run iman:
"Bal eega, maalmihii waa imanayaan, ayaa Rabbigu leeyahay, beerta falaa uu raaci doona kan gooya in tareenka, iyo farcankaaga ku tunta canab, iyo buuraha khamri cusub u dareerin doonaa, oo kurihii oo dhammuna way wada dhalaali doonaan."
No mid ka mid aha laakiin waa Rabbiga keeni karaa isbeddel ah oo ku saabsan dhulka oo kale.
"Laakiin xaqiiqda ah waa, in haddii Shaydaanku dabacsan ma iman karo ka xabsiga, laakiin Ilaah kaliya wareejiyay dadka millennial in dhulka cusub, kuwanu waxay ka iman lahaa in mashquulin meel gaarka ah ee dareenka ah in ay marna la isku dayay, in ay si iskood ah rabay Ilaah ama Ibliiska adeegtaan. Waxaa laga yaabaa in sababta shaydaan ayaa si aad u hesho dabacsan. "
TAARIIKHDA caasinimo DAMBE ka gees ah Ilaah
Waxay u ekaan kartaa yaab leh in sida wakhti la yaab leh in Millennium wuxuu ku dhamaan doonaa by rebelling ka gees ah Ilaah iyo musiibo ka mid ah baaxadda weyn sida, dunida oo dhan by tagaa. Laakiin taasi John sheegayaa noo, la yaab leh sida ay codadka.
"Oo markii kunkii sannadood dhammaadaan ayaa Shayddaanka laga furi doonaa xabsigii lagu xabbisay. Oo waxay ku warwareegaan doonaa inuu khiyaaneeyo dadka, in ho at afarta gees oo rukummada, Juuj iyo Maajuuj inuu iyaga u soo ururiyo dagaalka; oo tiradooduna waa sida ciidda badda. Oo waxay ku soo kor baxeen ballaadhka dhulka ee kor saaran oo waxay hareereeyeen kaambadii quduusiinta iyo "magaalada la jecel yahay"; iyo dab baa samada ka yimid oo kulligood baabbi'iyee. Markaasaa Ibliisku wuxuu in iyaga khiyaanayn waxaa lagu dhex tuuray baddii dabka iyo baaruudda ahayd, halkaas oo bahalkii iyo nebigii beenta ahaa lagu tuuray; oo ay weligood iyo weligoodba, habeen iyo maalinba la cadaabi doonaa "(Muujintii 20:. 7-10).
Badan ayaa yaabay sababta Shaydaanka la oodda markii uu hal mar lagu xidhay. No jawaab toos ah ma aha oo waxaan ku jirnaa Kitaabka. Si kastaba ha ahaatee lössläppes isagu ma uu samayn, waayo, wuxuu u adeegi jireen xukun, oo Ilaah ku tumata isaga ugu xiriirta dambiyada ah in uu ka go'an marka uu labadaas nadhumiyey oo dadka oo isu soo kor ka gees ah Ilaah. Ciqaabka denbiguna waa weligeed ah, waayo, kuwa aan toobad keenaan oo aaminsan in Ciise. Iyo in ay dhacdo diinta Shaydaanku iyo in toobaddii, dib u soo celinta iyo weheshiga Ilaaha aan la malayn karin.
Laakiin xaqiiqada ah waa, in haddii Shaydaanku dabacsan ma iman karo ka xabsiga, laakiin Ilaah kaliya wareejiyay dadka millennial in dhulka cusub, kuwanu waxay ka iman lahaa in mashquulin meel gaarka ah ee dareenka ah in ay marna la isku dayay, in ay si iskood ah doonayay in ay u adeegaan Ilaah ama Ibliiska. Waxaa laga yaabaa in sababta Shaydaanku waa iman dabacsan.
"Maanka ku Ibliisku ee wax ka beddeli mayso inta lagu guda jiro tahay kun Sano oo xarig ah, mana jiraan wax la yaab leh. Isagu waa iyo nagaadi ah cadow Ilaah."
Sidaas darteed, Annagu waxaannu nahay noo caddeeyo, in xabsi Ibliiska ma loogu talo galay inuu maankiisa bedelo, laakiin in la siiyo aadanaha iyo kadis ah oo dhan abuurka nasniin muddo kun oo sano, vilosabbaten, ka dib markii lix tusenårsperioder dadaal, dagaalamaan oo u soo jeesan.
maanka Ibliisku ee wax ka beddeli mayso inta lagu guda jiro tahay kun Sano oo xarig ah, mana jiraan wax la yaab leh. Isagu waa iyo waari weli cadow Ilaah. Laakiin naxariis badan Ilaah dadka aan helin abaal fiican waa cajiib.
Markuu u Qurxiyey Shaydaanku yimaado dabacsan, oo uu ka heli isla markiiba la xiriira in Quluubtooda somligas. Man ayaa kala ah nooca dhacay ayaa weli. dadka Millennial ee la xiriirta isku Adam istaagaan sidii aannu ku samayn lahayn. Waxay sidoo kale waxaan u baahanahay inaan mar kale dhalataan.
Farqiga iyaga inta ay kunkii sannadood waa in Shaydaan waxay ku xidhan tahay, oo markuu iyaga ma saamayn ku leh jirrabaaddo uu, isu subordinating sharciyada Ilaah ee la xiriirta da'deeda dibadda iyo diidmo la'aan. Laakiin Markuu u Qurxiyey Shaydaanku yimaado dabacsan, wuxuu ururiyaa mar ciidan, sida badan sida cammuudda badda, iyo barbaro ku kacay Yeruusaalem, halkaas oo sharciga Rabbiga ku salaysan waxaa ka gees ah. (Mic 4:. 2)
Laakiin dab ka yimid xagga jannada, gubeen dad caasi ah, kuwa Quluubtoodu inay halkii dooran Shaydaanku Ciise sida King. Markaasaa Shayddaan ku tuuri doontaa badda ay dabka, weligiis more marnaba inuu yimaado dabacsan.
Qoraalkan waxaa laga soo qaatay buugga "The World of riwaayadaha fal la soo dhaafay" by pages Egon MELIN 73-85. Quduusnaanta Forlag - Kumla. In 1968.
Articles iyo videos in la sameeyey by kale oo aan ahayn Apg29.nu laga yaabaa in views in site blog ma wadaagno.
Vecka 38, tisdag 17 september 2019 kl. 12:53